Midowga Yurub oo ku Qasbanaaday in ay Heshiis la bilaabaan Belarus Xaalada Qaxooti ee ka jirta
HomeWararka CaalamkaMidowga Yurub oo ku Qasbanaaday in ay Heshiis la bilaabaan Belarus Xaalada Qaxooti ee ka jirta
November 18, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Caasimada Minsk ayaa maanta oo Arbaca ah ku dhawaaqday in madaxweynaha Belarusia Alexander Lukashenko iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ay ku heshiiyeen in ay bilaabaan wada xaajood heer Yurub ah si loo xalliyo dhibaatada soogalootiga ee xuduudaha Midowga Yurub iyo Belarus.
Xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha Belarus ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee “Belta”, in Merkel iyo Lukashenko ay ku heshiiyeen in “dhibaatada oo dhan ay dib ugu noqoto heerka (xidhiidhka) Belarus iyo Midowga Yurub. “iyo in” saraakiisha ay soo magacaabeen mid kasta oo ka mid ah dhinacyadu ay si degdeg ah u qaban doonaan wadahadal.”
War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in “rabitaanka qaxootiga ee ah inay tagaan Jarmalka laga hadlidoono.
Lukashenko iyo Merkel ayaa Arbacadii ku hadlay taleefankii labaad ee saddex maalmood gudahood.
Xafiiska warbaahinta ee madaxweynaha Belarus ayaa intaa ku daray in “dhinacyadu ay gaadheen nooc heshiis ah oo ku saabsan habka loo dhaqmayo iyo in horay loo socdo si wax looga qabto arrimaha jira.”
Kumanaan muhaajiriin ah oo intooda badan ka yimid bariga dhexe ayaa maalmo ku sugnaa xadka Belarus uu la wadaago Poland, iyagoo rajeynaya inay galaan Midowga Yurub